> Resource > Video > Video Editor u Mavericks: Sida loo Edit Videos in OS X Mavericks
Sida Mac OS X 10.9 Mavericks noqon doonaa nidaamka qalliinka loo jecel yahay oo reerka u isticmaala Mac, waxaad u baahan kartaa video qalab tafatirka cusub ee Mavericks tan iyo barnaamijyo badan ma sii taliska ee Mavericks. Halkan waxaan ku talinaynaa software ugu fiican Video ayeey u Mac OS X Mavericks- Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) . Tani waxay si joogto ah updated Mac video editor si fiican u shaqeeyaa Mavericks oo u taagan soo baxay aaneeyay in muuqaalada video tafatirka caan ah iyo ugu shugri naqo. Hadda download editor video loogu talogalay Mavericks oo ay bartaan sida loo edit videos in OS X Mavericks.
1 Download Video Editor this u Mavericks oo ku darto files
Download Free iyo orod Video Editor on Mac OS X Mavericks, u tag File> dar Faylal ay si toos ah ama jiidi-n-jeedi videos in waqtiga ay u dajiyaan file aad rabto in aad wax ka bedel ku saabsan Mac. Si laguugu sahlo, browser warbaahinta ah waxaa la siiyaa inaad files ka Lugood maktabadda, iMovie, iwm hesho By jidkii, aad xitaa ku qori karta videos la isticmaalayo qalab video qabashada ama la iSight dhisay-in.
Jar, dalagga, shaandheyn video, iyo dar horyaal, filtarrada, video saamayn iwm
Video Editor Ku siinayaa aad uga fudud videos waayo-aragnimo ah oo ku saabsan Mac OS X Mavericks sixiddiisa. Waxaa jira laba siyaabood oo loo edit video. Mid ka mid ah waa in riix badhanka shiraaqii video hoostiisa dooran hawlaha tafatirka kala duwan sida daluugta ah, abuurka, wareegga, Title, Saamaynta oo dheeraad ah. Kale waa in la muujiyo video clip ka dibna riix linkiga u dhigma goo, Dalag, isku beddesha, Voiceover iyo button in bar qalabka.
Ku dar kala guurka ama credit / Intro
Si aad ku dari kala guurka, waxaad riixi kartaa "guurka", ka dibna jiidi aad saamayn guurka jecel in ay wadada ka badan video si aad u codsato. Markaas double u riix si aad u dhigay mudada kala guurka si xor ah. Sida aad arki karto, waxa aad dalban kartaa mid ka mid saamayn guurka jecel in dhammaan clips ama ha software aan kala sooc lahayn daro kala guurka ah ee aad. Si aad videos dheeraad ah oo cajiib ah ka dhigo, waxa kale oo aad ka badalan karaa in ay "Intro / Credit" tab ay ku darto Intro / credit kala duwan saamayn in waqtiga. Si aad u bedesho hawlgeli iyo qoraalka, doortaan "Title" function oo astaysto sida aad jeceshahay.
3 Save the videos saxar ah
Riix ah "Dhoofinta" button on furmo suuqa hoose in ay soo bandhigaan suuqa kala saarka. Waxaa jira dhawr fursadood oo aad u: Device, Qaabka, YouTube iyo DVD. Dooro hab aad rabto in aad si loo badbaadiyo ama wadaagaan videos saxar ah. Just leeyihiin isku day ah.
Hadda download this video resize u Mavericks iyo sahamin ka badan hawlaha video tafatirka!